Ireo mpanamboatra kitapo simenitra dia mamakafaka ny fahombiazan'ny toetra mampiavaka ny harona plastika tenona 1, ny mavesatra maivana amin'ny plastika amin'ny ankapobeny dia maivana, ary ny hakitroky ny randrana plastika dia manodidina ny 0, 9-0, 98 g / cm3. Randrana polypropylene mahazatra ampiasaina matetika. Raha tsy ampiana filler dia mitovy amin'ny t ...
Abstract: Mino aho fa ny olon-drehetra dia tokony hahafantatra ilay kaontenera, izay kaontenera lehibe ampiasaina hitaterana sy hitahirizana entana. Androany, ny tonian-dahatsoratry ny plastika boda dia hampahafantatra anao ny anaran'ity entana ity izay teny iray monja avy amin'ny kaontenera, izay antsoina hoe FIBC. ny fireneko plas ...
Ho an'ny vokatra kitapo misy tenona, dia fahita eo amin'ny fiainantsika izany, ary ny kitapo tenona koa dia mizara ho karazany maro, ary indraindray ny tahan'ny fahasimban'ny vokatra kitapo tenona dia avo loatra, avy eo inona no ifandraisany amin'ny Inona? Ity misy fanadihadiana fohy nataon'ny mpiasan'ny famokarana kitapo Hebei: ny fiainan'ny ...
Ny orinasa fahatelo dia efa manana mpanjifa marin-toerana, valizy ambany valiny ambany
Avy amin'ny fanaovana-kitapo-fanaronana-kitapo fanaovana kitapo ， Ny dingana rehetra ampiasain'ny fitaovana Starlinger, mba hiantohana ny kalitaon'ny kitapo tenona
Ho vita ny fametrahana ny jiro boribory faha-43 ka hatramin'ny faha-50 an'ny AD
Ny orinasantsika fahatelo dia efa nanomboka famokarana ampahany. Ny orinasa fahatelo dia misy kofehy boribory 43 Starlinger miasa amin'izao fotoana izao ary misy singa vaovao 7, ary hapetraka tsirairay izy ireo.
Nandray fitifirana seho virtoaly 360 degre VR izahay, afaka mahatsapa ny traikefa manitrika ao amin'ny ozinina harona pp
Ny orinasan-tsika fahatelo dia nampiasaina, mahatratra 130mu ny velarany. Ity fitifirana ity dia nampifangaro ny tantaran'ny ozinina voalohany, ny fahaizan'ny famokarana faharoa, ary ny refin'ny ozinina fahatelo. Noho ny fiantraikan'ny valanaretina, ny VR dia mety afaka manatsara ny mpanjifa toy ny visitin ...
Izahay dia nanao ny atrik'asa Taom-baovao 2020 Tao amin'ny atrik'asa kitapo simenitra pp ad
Ny vadin'ny lehibentsika dia manome loka ny mpandresy amin'ny lalao Isika dia manetsiketsika ny mpiasa rehetra isan-taona Avy amin'ny departemanta fisakafoanana, sampana atrikasa, sampana famokarana, sampan-draharaha teknika, sampana fanaraha-maso kalitao, sampana fanontana ary departemanta fivarotana, samy ho tonga amin'ny ozinina avokoa ny tsirairay ...
Fomba fanalefahana roa ho an'ny harona jumbo
Ny vokatry ny kitapo taonina dia matetika ampiasaina amin'ny lozisialy lehibe, ary tokony hitandrina ny fomba famoahana azy isika rehefa mampiasa azy. Ka inona avy ireo fomba roa famafana mahazatra? Ity manaraka ity dia nolazain'i Hefa Editor: ny fomba famoahana fitaovana isaky ny kitapo dia ny miasa araka ny karazana ...
Kitapo simenitra 50KG endrika vaovao ho an'ny tsenan'i Africa
Ampio ny orinasa simenitra maro any Afrika hanao kitapo simenitra vaovao Fanontana tsara sy fampiasana avo lenta no nahazo fiderana iraisan'ny mpanjifa. Raha mila amboarina koa ny kitaponao, mifandraisa aminay
Kitapo vita amin'ny polypropylene (PP) nandrakotra Teknolojia
1. Fampiharana sy fanomanana fohy: Ny fitaovana manokana amin'ny firakotra polypropylene dia ampiasaina amin'ny fametahana kitapo misy polypropylene sy lamba voatenona. Aorian'ny fonosana, ny kitapo voatenona vita amin'ny fonosana dia azo ampiasaina mivantana tsy misy kitapo polyene. ny tanjaka sy ny fahombiazan'ny ankapobeny ...
Ohatrinona ny vidin'ny milina fanaovana pirinty vita amin'ny simenitra haingam-pandeha haingam-pandeha
Ity milina ity, izay ampifanarahana amin'ny milina misy laminasy na tsia, dia ampiasaina amin'ny fanamboarana kitapo simenitra misy laminasy sy karazan-kitapo vita amin'ny Pp Woven Bags. Izy io dia manana ny asan'ny fanontam-pirinty, ny fanaovana gusseting, ny fanapahana fisaka, ny fanapahana karazana 7, ny fanitsiana ny sisin'ny auto-pneumatic ho an'ny famahanana ara-nofo ary manana ny tombony ...
Fanontaniana napetraka matetika momba ny kitapo tenona PP
1.Inona ny karazana kitapo PP? Ny fanontaniana be mpitady indrindra ao amin'ny Google momba ny kitapo PP dia ny endriny feno. Ny kitapo PP dia fanafohezana ny Polypropylene Bags izay manana fampiasana arakaraka ny mampiavaka azy. Hita amina endrika Tenona sy tsy tenona, ity kitapo ity dia manana karazany maro isafidianana. 2. Inona no ...
Kitapo misy lamina Bopp, Kitapo valizy ambany, Pp Cement Block Valve ambany kitapo, Pp Fonosana, Kitapo fonosana simenitra eo ambanin'ny valizy, Pp Kitapo tenona, Vokatra rehetra